Praiminisitra Mahafaly Olivier : « Vonona hiara-hiasa amin’ny famongorana ny pesta ny governemanta » -
AccueilRaharaham-pirenenaPraiminisitra Mahafaly Olivier : « Vonona hiara-hiasa amin’ny famongorana ny pesta ny governemanta »
“Samia mandray ny andraikitra tandrify azy”. Io no nambaran’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta, Solonandrasana Mahafaly Olivier, nandritra ny fidinany ifotony nijery ny fanadiovana ny tanàna teny amin’ny faritra Antohomadinika omaly.
Tamin’izany ihany koa no nanambaran’ny praiminisitra fa tsy tokony hifanenjika sy hifanilika andraikitra ny tsirairay. Notsindriany mafy mantsy fa tsy tokony ala olana velively ny tsy fahampian’ny fanampiana eny anivon’ny kaominina tsirairay. “Tsy tokony hahasakana ny fandraisana andraikitra velively ny tsy fahampian’ny fanampiana ny kaominina avy amin’ny Fitondram-panjakana. Maninona ny kaominina sy ireo tanàn-dehibe, ireo tanàna sasany, toa ny any Antsirabe, ny any Antsiranana, sns, no madio nefa tsy ampy hatrany ny fanampiana avy amin’ny Fanjakana? Tsy hifamaliantsika anefa izany fa ny fandraisan’andraikitry ny tsirairay no tena zava-dehibe”, hoy ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier.
Ankoatra izay, notsindrian’ny praiminisitra hatrany fa tompon’andraikitra voalohany amin’ny fahadiovan’ny tanàna ny Ben’ny tanàna rehetra tsy ankanavaka, indrindra fa amin’ireo tanàna nahitana tranga sy nisian’ny valanaretina toa an’Antananarivo Renivohitra sy Toamasina.
Nanambara kosa anefa ny praiminisitra fa vonona ny hiara-hiasa amin’ny famongorana ny valanaretina pesta ny governemanta izay tarihiny. “Tsy tokony hifanilika andraikitra isika. Izahay vonona ny hifanantona amin’izay tokony hifanomezan-tanana. Tokony ho tsapantsika anie fa tsy mila zavatra goavana ny fanadiovana e! Rehefa mandray andraikitra ao anatin’ny fahadiovam-po dia izay no zava-dehibe”, hoy hatrany ny praiminisitra.
Tetsy andaniny, nampanantena ny praiminisitra fa vonona hatrany amin’ny famerenana ny fahasalamam-bahoaka amin’ny laoniny ny governemanta, araka ny hafatra sy baiko nomen’ny Filoham-pirenena.
Ankoatra izay, nisy ny fanentanana sy ny fanomezana toromarika nataon’ny Faritra Analamanga tamin’iny faritra Antohomadinika sy ny manodidina iny ny amin’ny fanadiovana ny tanàna mba hisorohana sy hifehezana ny fiparitahan’ny valanaretina pesta. Nanambara ny lehiben’ny Faritra Analamanga, Ndranto Rakotonanahary, fa ho nofinofy ho an’ny Malagasy izany aretina pesta izany aoriana kely.
Hiaraha-mahita ny olana eo amin’ny famokarana vary vokatry ny fiovaovan’ny toetry ny andro amin’ny ankapobeny. Tsy fahampian’ny rano, tsy zarizary ny voka-bary miakatra izay mahatonga ny olana mitranga ankehitriny. Manoloana ny toe-draharaha dia tsy miraviravy ...Tohiny